Joojinta, calaamadaha, sababaha iyo daaweynta | Ragga Stylish
Waxaa jira hadal joogto ah oo ku saabsan joojinta caadada haweenka. Waa xaaladda ay haweenku ku sii socon karin caadada da 'cayiman. Da’du waxay kuxirantahay nooca dumarka iyo xaaladooda. Xagga ragga, waxaa jira joogsiga. Waxaan ka hadli doonnaa tan inta lagu jiro maqaalka. Waa hoos u dhac ku yimid soosaarka testosterone, mid ka mid ah hormoonada ragga ninka ugu muhiimsan.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegeynaa maxay yihiin astaamaha ugu weyn ee lagu garto dhaq-dhaqaaqa iyo wax walba oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato.
1 Waa maxay kacsi la'aan
2 Calaamadaha ugu muhiimsan
3 Maxaa la sameeyaa
Waa maxay kacsi la'aan
Sidii aan horay u soo sheegnay, testosterone waa hormoon aad u muhiim ah oo lab ah. Waxay ku leedahay hawlo badan oo muhiim u ah jirka bini'aadamka waxayna leedahay habab kala duwan oo lagu kiciyo isku-dhafkeeda. Guud ahaan, isku-darka testosterone wuxuu gaaraa heerkiisa ugu sarreeya marka aad yar tahay. Waxay sidoo kale si dhow ula xiriirtaa ragga u heellan jir-dhiska iyo jir-dhiska si ay uga caawiso helitaanka murqaha.
Andropause waa gobolka uu hormoonkan ragga ah ku joojiyo soo saarista tiro la mid ah had iyo jeer. Hoos u dhac muuqda ayaa la soo maray. Caadi ahaan, da'da ay raggu ku joojinayaan soo saaristeeda inta badan waxay u dhaxeysaa dabayaaqadii 40s iyo 55s. Hormoonkaas waa hormoon sameeya saameyn isku mid ah sida estrogens-ka dumarka.
Laga bilaabo da'da 30, lHeerarka testosterone ee ninku waxay bilaabaan inay hoos u dhacaan 15%. Marka da'da 45 jir ay dhaafto, waa marka astaamaha ugu horreeya ee istaroogga ay bilaabmaan in la dareemo. Markaad gaarto da'da 50, heerarka testosterone waxay hoos ugu dhacaan ilaa 50%. Dadka jira 70 sano ama ka weyn, waxay leeyihiin heerar testosterone aad iyo aad u hooseeya oo mar dambe uma oggolaanayaan kacsi ama xaalado aad u yar.
Sababaha ugu muhiimsan ee sababta iyo kicitaanku u dhacaan way gaboobayaan, laakiin sidoo kale waxyaabo badan sida khamriga, walwalka, daawooyinka qaar iyo cayilka. Dadka qaba boqolkiiba dufan badan waxay u muuqdaan inay leeyihiin heerarka ugu hooseeya ee testosterone, sidaas darteedna, libido galmoodkooda waa la dhimay.
Maaddaama testosterone ay gacan ka geysato sidii loo dhisi lahaa borotiinnada waana midka ugu weyn ee mas'uulka ka ah taranka galmada ragga, astaamaha ugu waaweyn waxaa lagu xusi karaa hoos u dhaca bacriminta.
Astaamaha ugu waaweyn ee aan ku aragno bilowga koriinka iyo jimicsiga waa:
Isbedelada dabeecadda iyo niyadda. Guud ahaan waxaad u egtahay mid liidata oo aan doonayn inaad wax wajahdo. Mid ayaa sii wata libido yar iyo rabitaan galmo midna wuxuu diirada saaraa noocyada kale ee faahfaahinta ee ka fog galmada.
Daal kordhay tamar darida. Si dhakhso ah ayaad u daalaysaa isla markaana ma lihid tabar badan sidii hore.
Iyada oo libido yar iyo rabitaan galmo, ayuukacsiga waa yar yihiin waana soconayaa. Adiga oo aan u dareemin sida galmada, ma lihid dhiirigelin kugu filan inaad kacsato. Rag badan ayaa aakhirka qasbaya ama doonaya galmo laakiin jidhku uma jawaabo iyaga. Tani waa marka daawooyinka la tuuro oo dhibaatooyin kale ay ka dhalan karaan isticmaalkooda aan la xakamayn.
Waxay kordhisaa miisaanka iyo xanaaqa. Waxaan umuuqnaa mid dulqaad yar sababtoo ah waxaan daallan nahay oo aan daallannahay. Tani waxay naga dhigeysaa inaan cunno cunno badan si aan u helno dhiirrigelin naga farxisa. Sida iska cad, miyaanan u tashanaynin digaag digaag la dubay, laakiin waxaan u baahanahay macmacaan iyo shukulaato. Arrinta shukulaatada kuma eka dumarka.
Walwal iyo niyad jab Waxaan nahay kuwa aad u walwal badan wax walbana wey kasii darayaan ilaa heer aan galeyno dhacdooyin yar yar oo niyad jab ah. Wixii markii hore fududaan jirtey in la xaliyo ayaa hadda ka badan buur qulqulaya oo lagu socdaalayo.
Hoos u dhigida xoogga iyo mugga biyo baxa. Haddii ka hor aynaan ku raaxeysan karin miro biyo baxa oo xoog badan oo raaxaysi leh, hadda way ka sii liidataa.
Dhidid badan, dhibaatooyinka wareegga dhiigga, iyo madax xanuun. Calaamadahaasi waa kuwo isku xidhan. Markaan dareemeyno kuleyl badan, waxaan la kulmi doonaa dhidid badan oo jirka ah. Markaan sii yara dhaqaaqno si aan u dareemo daal badan iyo dhiirrigelin la'aan, dufanka jidhkeennu waa kordhayaa iyada oo ay la socoto dhibaatooyinka wareegga dhiiggu Ugu dambeyntiina, raaxo-darradu waxay kordhisaa inta jeer ee madax-xanuun.
Waxa ugu horreeya waa in laga fekero in hoos u dhaca heerarka testosterone uu sababi karo khatar dheeraad ah muuqaalka muuqaalka oo keliya ma aha dhibaatooyin caafimaad oo ku meel gaar ah laakiin muddada dheer ah. Nidaamka qalfoofka wuxuu ku xanuunsan karaa dhaqdhaqaaqa jirka oo yaraada, heerarka dufanka jirka iyo culeyska oo kordha, nidaamka wadnahana wuxuu la kulmi karaa dhibaatooyin wareegga dhiigga. Waa lagama maarmaan in la ilaaliyo cunto wanaagsan oo ku xiran jimicsi jireed oo joogto ah si aan xaalad wanaagsan u dhigno.
In isboortigaasi kaliya loogu tala galay dhalinyarada iyo dhalinyarada ma aha sidaas. Kuwa ka weyn 40 waa inay taam ahaadaan sidii iyagoo da 'yar. Dhaqdhaqaaqa jirka waa in loo waafajiyaa waxqabadka mid walba si ay waxtar u yeelato. Adoo yareynaya boqolleyda baruurta iyo kordhinta jimicsiga wadnaha iyo xididdada waxaan xoojin doonnaa soosaarka testosterone iyo ka fogaanshaha dhibaatooyinka wareegga dhiigga.
Haddii aad ka shakisan tahay inaad leedahay qaar ka mid ah calaamadaha aan kor ku soo xusnay, waa sababta oo ah waxaa laga yaabaa inaad bilowdo inaad yeelato oo aad kacsato. Waxa ugu fiican kiisaskaani waa inaad u tagto takhasusle kaasoo sameyn doona baaritaanka dhiigga si uu u xaqiijiyo oo uu kula taliyo mar walba. Baaritaanka dhiigga waxaad ku ogaan kartaa heerarka testosterone-kaaga waxaadna ku daaweyn kartaa howlaha la soo sheegay.
Aad ayey muhiim u tahay inaad daawato cuntadaada iyo jimicsigaaga waqti kasta oo aadan ku qaadin inaad u maleyneyso inaadan waxba ka qaban karin. Taas bedelkeeda, ku dhaca wareegga astaamaha astaamaha iyo qaadista iyaga ayaa marmarsiiyo u ah cunidda iyo cunista iyo dufanka, dhibaatooyinka sii kordhaya iyo caafimaadka xitaa in ka badan. Xusuusnow in joogsigu uusan cudur ahayn, laakiin daqiiqad ku meel gaadh ah oo ku dhammaan doonta sida caadada haweenka oo kale, waxay kugu xidhan tahay adiga sida aad u rabto inaad isu aragto jir ahaan iyo caafimaad muddadaas ka dib.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Caafimaadka » Andropause